Abaabulka beerta waa in lagu sameeyaa taxadar weyn. Si kastaba ha noqotee, xitaa marka adeegsaduhu uusan lahayn jardiino ballaaran oo loogu talagalay, laakiin kaliya jardiino yar yar, ama xitaa balakoon ama dhul beereed, waxay sidoo kale abuuri kartaa qeyb yar oo boos cagaaran. Saldhiggiisuna wuxuu markaa noqon doonaa dheriyo jardiinooyinoo doorashadoodu aad u weyn tahay.
Waa kuwee dheriyo loogu talo galay beerta inay doortaan, iyagoo tixgelinaya alaabtooda ama cabirkooda?
Eeg sidoo kale: Qaab dhismeedka magaalooyinka yar yar
Noocyada dheriyada jardiinooyinka
Dheriyo jardiinooyin ayaa laga heli karaa xulashooyin badan oo kaladuwan. Waxay ku kala duwan yihiin qaab, cabir iyo qalab, marka waxaas oo dhami waxay kuxiran yihiin fikradda qaabaynta booska. Haddii dheriyaduhu u qaybsan yihiin agabkooda, waxyaabaha soo socda ayaa la tixgelinayaa:
Dheriyo jardiinooyin alwaax ah
Dheriyo jardiinooyin alwaax ah - sida la ogsoon yahay, alwaaxku waa shey dabiici ah, taas oo mahad leh taas oo dheryaha jardiinada alwaaxdu ku habboon yihiin jardiinooyin kasta ama bannaanka oo aan laga reebin. Ka dib oo dhan, sidoo kale waa naqshad xiise leh iyo wax wada qabsi. Taasi waa sababta ay dheriyo jardiinooyin alwaaxdu ay si buuxdo ugu buuxin doonaan booska alwaaxyada, rattan ama kuraasta tikniyoolajiyada-teknoolojiyadda iyo kursi-gacmeedka, iyo sidoo kale inay la jaanqaadaan meel aan ka yarayn sidii caadiga ahayd.
Dheriga beerta la taaban karo
Dheriga beerta la taaban karo - dheriyo la taaban karo oo jardiinooyin ah ayaa badanaa lagu isticmaalaa goobaha dadweynaha. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale lagu meelayn karaa jardiinooyinka guriga, balakoonnada ama barxada guriga. Muhiimad ahaan, marka la eego aragtida isticmaalka, dheriyo la taaban karo waa la culus yahay, sidaa darteedna dhinaca dhinaca u adkaysata dhaqdhaqaaqa dabaysha, dhinaca kalena way adag tahay in la dhaqaaqo. Haddii kuwani meelaha banaan yihiin, waxay sidoo kale buuxin karaan muuqaalkooda. Markaa way haboon tahay in lagu maalgaliyo dheryo la taaban karo oo leh qaabab jajaban, ama dheriyo kaliya lagu daydo wax la taaban karo.
Weelasha jardiinooyinka caagga ah
Weelasha jardiinooyinka caagga ah - Dheriga noocan ah waxaa badanaa lagu gartaa qiimo jaban. Intaa waxaa u dheer, waa badeecooyin aad u tiro badan (oo ay ku jiraan dheriyo waaweyn oo waaweyn iyo kuwo yaryar, dheriyo jardiinooyin yaryar iyo mid sare ah, dheriyo jardiinooyin casri iyo mid casri ah). Badanaa iyagu waa kuwa fudud oo sidaas awgeed si fudud loo qaadi karo. Dhanka kale, waxay si fudud u garaacaan xawaaraha dabaysha, sidaa daraadeed - gaar ahaan dheriyo balaastig ah oo balaaran - waxay mudan tahay in lagu daro culeys dheeri ah. Daloolka hoose ee dheriga balaastigga ah sidoo kale wuxuu noqon doonaa mid waxtar leh, kaas oo hubin doona hawo-siin habboon ee geedka lagu dhex beeray.
Dheriga beerta dhoobada
Dheriga beerta dhoobada - Shaki la'aan, dheriyada seeraha dhoobada (waaweyn iyo kuwa yar) waa mid ka mid ah dheriyada inta badan loo adeegsado, maxaa yeelay waa nooc diyaarin xiiso leh. Way fududahay in la guuro oo intaas waxa u dheer waxay u adkaystaan ​​xaaladaha cimilada. Tan ugu muhiimsan, marka la eego daryeelka dhirta, waxay xaqiijinayaan wareegga hawo habboon. Nasiib darrose, dheriyada seeraha seeraha ah ma aha kuwo waara oo fududa in la jabiyo, tusaale ahaan markaad dhaqaajineyso ama wadid sidid.
Dheriga beerta dhagaxa
Dheriga beerta dhagaxa - dheri aad u qurux badan oo gaar ah, laakiin dheriyo jardiinooyin qaali ah, oo badanaa lagu isticmaalo meelaha caamka ah (tusaale. qabuuraha dhexdooda). Waxyaabaha dheriyada dhagaxa laga dhigi karo waxay noqon karaan kuwo la aqoonsan yahay ama marmar.
Dheriga beerta ee birta
Dheriga beerta ee birta - Dheriga birta sida caadiga ah waa badeecado yar yar, oo badanaa la adeegsado aluminium ama bir la dubay, taasoo ka ilaalinaysa daxalka. Intaas waxaa sii dheer, waa dheryo-qaboojin u adkeysan u leh daafaha oo looga tagi karo dibadda sanadka oo dhan. Waa in loola dhaqmo sidii dheriyo beero oo casri ah.
Dheriga Technorattan ama doolshe rattan
Dheriga Technorattan ama doolshe rattan - dheriyo ubax wanaagsan oo loogu talo galay jardiinooyinka qurxinta, balakoonnada, terraces iyo gezebos qaab casri ah. Waxay bixiyaan xulasho ballaaran marka loo eego qaabka iyo cabirka, oo u adeegi kara dabool ahaan dheriga saxda ah ee agab kala duwan. Farqiga u dhexeeya rattan iyo poly rattan waa, waxyaabo kale, iska caabbinta qoyaan iyo shucaaca qoraxda. Dabcan, poly rattan wuxuu u muuqdaa mid kufiican qadarintan.
Sidoo kale eeg: Beerta nasashada, magaalada iyo kuraasta beerta
Ama laga yaabee dheriyo magaalo qurxin ah?
Xulashada dheriyo beero waa mid aad u weyn, gaar ahaan maadaama jardiinooyinka qaarkood aad ku doodi karto asalka ah, mid ka mid ah nooc dheriyada magaalada. Xaaladdan oo kale, kuwani had iyo goor waa dheriyo leh cabbir ballaaran ama ugu yaraan cabbir dhexdhexaad ah, sidaa darteed waxay si fiican ugu shaqeyn doonaan meelaha waaweyn, inkasta oo aysan xeerku ahayn. Dheriga ubaxa magaalada ee sida habboon loo xushay ayaa hubaal ah inay qurxin doonaan jardiinada oo ay ku dari doonaan midab.
Sida caadiga ah, waa qaab dhaqameed, qaab yar, taas oo loogu mahadcelinayo taas oo si buuxda ugu habboonaan doonta diyaarinta beerta, gaar ahaan qaab casri ah. Waxa intaa ka sii badan, dhanka kale, waxay yihiin dheriyo qurxin ah, dhinaca kale, wax ku ool ah oo leh howlo dheeri ah:
dheriyo ubax dhalaalaya.
Sidan, waxay isku daraan suuxinta iyo shaqada waxqabadka ah. Dherigu wuxuu u adeegi doonaa meel ubax ah, ku xoortay geedihii ama geedo yaryar, iyo sidoo kale miis, kursi, ama fiidkii ka dib wuxuu calaamad u noqon doonaa wadooyinka isgaadhsiinta ee beerta.
Waa kuwee dheriga beerta ee la xusho?
Marka si cad ayay u muuqataa in ay jiraan xulasho aad u ballaaran oo dheryo beero ah oo suuqa ku yaal, marka qof walbaa waa inuu helaa wax ku habboon beertiisa, balakoonka ama barxada. Dhammaanteed waxay kuxirantahay diyaarinta booska, tusaale ahaan qaab dhaqameed, casri ama qaab avant-garde. Qaarkood waxay dooran doonaan dheriyo alwaax ah, qaar kalena waxay dooran doonaan dheriyo bir ah ama bir ah. Dheriga yar yar waxaa lagula talinayaa balakoonka, laakiin dheriyada waaweyn ee beeraha waxay ku haboonaan doonaan dabaqa weyn. Sidoo kale ogow intaas dheri kasta waa lagu qurxin karaa, tusaale ahaan farsamooyin gacmeedyo aad u badan, xargaha, iyo xitaa rinjiyeynta.
Dad badan, qiimaha runtii waa sidoo kale qiimeynta xulashada. Tani macnaheedu maahan, si kastaba ha noqotee, inaad ku sharraxdid dheriyo jaban oo jaban. Iib (tusaale ahaan. On.) Naqshadeynta Magaalada) waa fursad wanaagsan oo lagu iibsado dheriyo wanaagsan oo laga sameeyay alaab tayo sare leh oo qiime qiimahoodu wanaagsan yahay. Sidan ayaad wax badan badbaadin kartaa, adoo iibsanaya qiimo jaban dheriyo jardiinooyin laga sameeyey la taaban karo, iyo xitaa dheriyo dhagaxyo gaar ah.
Aasaaska xulashada kale waa dhirta uu adeegsaduhu doonayo inuu ku beero meesha cagaaran ee jardiinadiisa, barxada ama balakoonka. Had iyo jeer uma baahna inay noqdaan dheriyo waawayn oo beerta ah. Inyar, Dheriga dhejisiga waxay si fiican ula shaqeyn doonaan fuulitaanka dhirta iyo wiyisha. Kuwa waaweyn xitaa ku xoortay geedihii iyo geedo dwarf ah ayaa la abuuri karaaiyo dheriyo adag oo nooc kasta leh Dhirta.
dheriyo laamood oo la taaban karodheriyo laamood oo la taaban karodheriyo jardiinooyin alwaax ahdheriyada magaaladadheryaha magaalada soo saaredheriyo jardiinooyindheriyo laamood oo la taaban karodheriyada beerta dhoobada ahdheriyo waaweyn oo digsi ahdheriyo jardiinooyin alwaax ahdheriyo waaweyn oo beero ahdheriyo beerta dhagaxaDheriga beerta ee birtadheriyo jiilaalka u adkaysi u lehdheriyo jardiinooyin casri ahdheriyo beerta caagga ahdheriyo waaweyn oo ka samaysan caagaggaiibinta dheriyaha jardiinooyinkadheriyo laamood oo la taaban karoDheriyo xardhoDheriga Technorattandheriyo jardiinooyin alwaax ahdheriyo waaweyn oo beero ahdheriyo ubax gaar ahdheriyo jardiinooyin casri ahdheriyo dhir dheer